जनकपुर: डिपार्टमेन्टल स्टोरमा आगलागी हुँदा अढाई करोडको क्षति
On: २०७७ पुष ९ गते, बिहीबार, ०४:०९ बजे प्रकाशित
बटुकनाथ झा, धनुषा। जनकपुरधामको शिवचोकमा रहेको मिथिला डिपार्टमेन्टल स्टोरमा आगलागी हुँदा अढाई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। आज बिहान उक्त डिपार्टमेन्टल स्टोरमा विद्युत शर्ट हुँदा भएको आगलगी ३ घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको थियो।
विद्युत तार शर्ट भई आगलागी भएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए। जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका कर्यालयको सय मिटर दुरीमा आगलागी भए पनि उप–महानगरले वारुणयन्त्र नपठाउँदा आगो थप बल्झिएको व्यापारीहरुको गुनासो छ।
आगो नियन्त्रणमा धनुषा तथा महोत्तरीबाट आएका ६ वटा बारुण यन्त्र, प्रहरी तथा स्थानीयबासीको सहयोगमा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिइएको हो। धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, जनकपुर विमानस्थल र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाको बारुण यन्त्रले आगलागी नियन्त्रणमा लिएको हो।
अन्य सम्बन्धित समाचार: हिउँबिना चल्दैन हुम्लीको जीवन
जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकामा दुईवटा बारुण यन्त्र रहे पनि महिनौंदेखि दुवै बिग्रिएर थन्क्याइएको छ। आगलागी हुँदा समयमै बारुणयन्त्र पठाउन नसकेको भन्दै आक्रोशित व्यापारीहरुले जनकपुरधामका मेयर लालकिशोर साह र उपमेयर रीता झाविरुद्ध केहीबेर नाराबाजी समेत गरेका थिए।
२०७७ पुष ९ गते, बिहीबार, ०४:०९ बजे प्रकाशित
कसले गर्दैछ नागरिक एपमाथि लाखौं साइबर हमाला?
सरकार, नागरिक समाजसँग क्षमा मागः डा. शेखर कोइराला